नेपाल आज | कमल थापा, पशुपतिशम्शेर राणा र डा. लोहनी राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको ब्यापार गर्दै
‘कसले भन्छ राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षद्वय पशुपतिशम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रपति इमान्दार छन्् ?’ राप्रपा संयुक्तमै रहेका नेता प्रदीपबिक्रम राणाको प्रश्न हो यो ।
राणा उनै नेता हुन् जसले तत्कालिन राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण हुँदा नेतृत्वमा कमल थापाबिरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका थिए । पछि उनी राप्रपाबाट अलग भएको डा. लोहनी नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रवादीमा आबद्ध भए । सो पार्टीमा उनलाई सह– महामन्त्री पनि बनाइयो ।
अहिले राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादीबीच एकीकरण गरी राप्रपा संयुक्त बनाइएको छ । तर, यो पार्टी निर्वाचनमा दर्ता हुन सकेको छैन । केही पार्टीका प्राविधिक बिषय र संविधानसंग बाझिएको बिधानको बिषयलाई लिएर पार्टी दर्ता हुन नसकेको हो ।
नेता राणा भन्छन्, ‘ कमल थापाको पार्टीको दुईवटा बिधान छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बिधानमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको बिषय काटिएको छ । उहाँहरु आफनो हातमा भने राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रसहितको बिधान छ । यो दोहोरो चरित्र होइन ?’
‘पशुपतिशम्शेर राणा र डा. लोहनी कहिलेदेखि राजावादी भए ? उहाँहरुको पार्टीको सिद्धान्त हिजो गणतन्त्र होइन ? आज एक्कासी कसरी राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र ? यो सबै कुर्सीका लागि गरिएको खेल हो । उहाँहरुलाई देश, जनता र पार्टीको सिद्धान्तसंग कुनै मतलव छैन । ’ राणाको आक्रोश छ ।
राप्रपा पार्टी आफैमा प्रजातान्त्रिक र मुलुकका लागि अपरिहार्य भएपनि यसका नेता भने ठीक नभएको राणा बताउँछन् । आफनो स्वार्थका लागि सिद्धान्तको बेचबिखन गर्ने मान्छेहरु नेता हुन नसक्ने उनको ठहर छ ।
अहिलेका राजनीतिक दलहरु गणतन्त्रप्रति इमान्दार नभएकाले राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने आवश्यकता आइपरेको हो । यसका लागि जनता सचेत हुँदै गएकाले चाँडै गणतन्त्र उल्टिने राणाको दाबी छ ।
केही दिनअघि मात्रै बारा र पर्सामा हावाहुरीबाट पीडित भएकाहरुलाई राहत बाँडेर काठमाडौै फर्किएका राणाले सरकार र नेताहरुको शैलीप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरे । उनले राहतको नाममा कतिपय नेता र संस्थाले मनोरञ्जन गरिरहेको आरोप लगाए ।
राजनीतिक दल र नेताहरुले पीडितलाई सहयोगको नाममा भोटको राजनीति गरिरहेकोमा समेत उनको असन्तुष्टि छ ।
‘पीडामा समेत राजनीति गर्न सक्ने कतिसम्म संवेदनाहीन भइयो, हो ?’ राणाले आश्चार्य व्यक्त गरे ।